११ बर्से केटो सङग चिकाउदा - Desi Sexy Stories MenuHomeForumSubmit Your Stories
MenuHomeIncestBro Sis Incest StoriesDad Daughter Incest StoriesFamily Group Incest StoriesGay, Lesbian Incest StoriesIncest Pregnant StoriesMom Son Incest StoriesOther Relations Incest StoriesCelebrity NudeRapeHumilation sex storiesNudes PhotosDesi Bhabi NudeDesi Nude PhotosNude photosEnglishDesiOfficeTeacher Ke Saath Sex StoriesCelebritywifeCouple Sex StoriesGirlfriend sex storiesHindi sex storiesMaid Servant sex storiesNaukar/Naukrani sex storiesSchool College Sex StoriesGroupExtreme Photos	Home » Nepali Sex Stories » ११ बर्से केटो सङग चिकाउदा
त्यति बेला मेरो उमेर त्यस्तै १६ भयेको थियो होला। घरमा म यक्लि छोरि हुनाले घरको रेखदेख सबै म नै गर्थे। म बिहान बिहान पढ्न जान्थे। बाकि दिन् भरि नै घरमा हुन्थे। ममि ड्याडि पनि दिनमा नै कुनै सरकारि आफिस मा काम गर्नु हुन्थ्यो। हाम्रो घरको काम मा सहयोग गर्न गाउ बाट १ बर्श पहिले बाबा ले १० बर्सहो यक जना केटा लेराउनु भाको थियो। केटाको उमेर सानि नै भये पनि उस्को जिउ डाल सपृ सकेको थियो। केटा पनि दिउसो स्कुल जान्थ्यो म बिहान कलेज जान्थे। हाम्रो भेट प्राय बेलुका नै हुन्थ्यो । उस्ले मलाई दिदि भनेर बोलाउथ्यो र मसङ कुनै हिचकिचहट बोल्चाल गरि रहन्थ्यो। बानि ब्याभार बच्चा जस्तो नै थियो। जेठ महिनाको १ दिन को कुरा हो , म आफ्नो कोठाभित्र पढ्न बसेकि थिएं । दिउँसोको त्यस्तै साढे बार बजेको हुंदो हो । बाहिर लागेको चर्को घामले रुखविरुवाका पातहरु लल्याकलुलुक भएर ओईलिएका थिए । थोपै हावा नचलेर बसिनसक्नु भएको थियो मेरो कोठा अझ त्यसमाथी माथीबाट जस्ताको छानो तातिएर पग्लेला झैं भएको । त्यो उखुम गर्मीमा म किताब खोलेर त बसेकि थिएं तर पढाईमा भने पटक्कै मन थिएन । बैसाख जेठको गर्मीमा केटीहरुलाई कुखुरा पालुं कि पोईला जाउं जस्तो हुन्छ भन्थे सांच्चै त्यस्तै भएको थियो मलाई । कोठाभित्र गुम्सिएर म अनेक रंगीन कल्पनामा डुब्दै थिएं । मेरो शरिरमा पातलो सुतीको म्याक्सी मात्र थियो । म्याक्सीभित्र पेण्टी र ब्रा फुकालेर मिल्काई सकेकि थिएं । एक त गर्मीले गर्दा शरिरमा टाँसिने कपडाहरु लगाउनै नसकिने त्यसमाथी यसरी रोम रोम रोमाञ्चित हुने कल्पनाको रंगीन संसारमा डुब्दा मलाई त्यस्ता कपडाहरुले अवरोध खडा गरेको महसुस हुने गर्छ । पढ्नको लागी खोलेको किताब खुल्लै मेरो पेटमाथी घोप्टो परेर नाईटोमा मुख जोतिरहेको थियो । म यौटा हातले म्याक्सी माथी बाटै आफ्नै छाती खेलाईरहेकि थिएं । मलाई आफैंले छाती खेलाउंदा थोरै दुख्ने गरेर स्तनको मुण्टो निचार्यो भने आनन्द लाग्छ – त्यसैले पनि होला मेरो छातीको गोलाई र स्तनको मुण्टो निक्कै सप्रेको निबुवा जस्तो ठुलो ठुलो भएको । म उत्तानो परेर बिछ्यौनामा मडारिईरहेकि थिएं । मडारिने क्रममा तलबाट म्याक्सी सुर्किईएर पेट सम्म आएको थियो । म अर्को हातले भने बाक्लिएर कालो हुंदै जाने क्रममा भएका रहर लाग्दा योनिक्षेत्रका रौंहरु मुसार्दै थिएं । वाताबरणमा भएको गर्मी र मेरो रंगीन कल्पनाले उमारेको जोसको संमिश्रणले गर्दा मलाई मेरो योनि भित्रबाट ज्वालामुखी विष्फोटन भएर लाभाहरु छरिन्छ कि जस्तै लाग्दैथियो । विष्फोटनकै संकेत स्वरुप मेरो योनिको मुखभागबाट निस्किएको चिल्लो चिप्लो पदार्थ मेरो हातले स्पर्स गर्दै थिय। त्यतिकै मा ढोका बाहिर बाट त्यो केटा दिदि भन्दै बोलाउन थाल्यो। म थोरै सम्हालियर बाहिर निक्ले र सोधे किन आज १२ बजे नै स्कुल बाट फर्केको? आज स्कुलमा हड्ताल छ भयेर चाडै नै आउनु परेको कुरा सुनायो।। मेरो जवानि को जोस अझ नि कम भको थियेन त्यो केटा लाई मित्र लगेर फटा फट म सङग चिकाई हलु जस्तो लग्दै थियो। तर फेरि केटा लाई थाहा छ कि छैन , फेरि के भन्ने हो भनेर मैले तुरुन्त केहि भन्न अनि गर्न पनि सकिन।
मैले भने उस्लाई जा फ्रेस भयेर आइज सङै फिल्म हेर्नु पर्छ। उ ५ मिनट म नै नुहायेर आयो। हल्फ पाईन्ट र टिसर्ट लगायर आयेको रहेछ। हामि डुबै मेरो ओछ्यान मा पल्टेउ। मैले ल्यापटप चोलेर सिधै ब्लु फिल्म लगाये र सोधे कहिले यस्तो गरेको छ भन्दै त्यो केटा लाई सोधे? उस्ले नाई भन्दै हेर्न थल्यो। ब्लु फिल्म मा पुति चाटेको लाडो चुसेको अनि बिस्तारै चिक्न थालेको सिन हेर्दा सम्म मैले खप्न नै सकिन र फिल्म बन्द गर्दै उसलाई जबर्जस्ति मैले भने त लाई पनि गर्न मन् छ उस्ले पहिला त नाई भन्दै थियो मैले नै उस्को हाल्फ पाईन्ट खोलेर सुताउदै उस्को सानो भाई खेलाउन थाले। उस्लाई पहिला त धेरै काउकुति लागेको रहेछ बिस्तारै उ मजा लिन थाले जस्तो गर्न थल्यो। केहि बेर पछि उस्को सानि तुरि पनि ठन्केर ७ इन्चि जति लामो भयो। उस्को लाडो को टुप्पो को छाला पनि फर्केको रहेन छ मैले बिस्तारै फर्काई दिय। उस्लाई झन धेरै काउकुति तथा थोरै दुख्दै रहेछ। मैले केहि हुदैन भनेर उस्को लाडो चुस्न थाले। उ अझ उफृन थाल्यो। मैले निकै बेर चुसे पछि उस्लाई सबै कुराको मजा आउन थलेको थियो भने मलैई भने खपि नसक्नु भयेको थियो। अब तेरो पालि भनेर म मेरो प्यन्टि फुकल्दै उस्को टाउको समातेर मेरो पुति तिर लगाउन थाले। पहिला त के गर्ने भन्दै थियो मैले भने फिल्म मा जस्तै चाट न भने उस्ले पहिला त घिन मने जस्त गरि चट्दै थियो तर पछि त मजाले ल्याप ल्याप चाट्न थाल्यो। केहि बेर चाटे पछि मैले नै उस्को लाडो चुस्न थाले र मेरो दुध माड्न लगाये। यो कर्म केहि बेर् चले पछि मैले नै उस्लाई चिक्न भने उस्को लाडो डन्डा जस्तो खडा भयेको थियो । उ म मथि चढ्यो। उस्ले आफै मेरो पुतिमा लाडो घुसाउन नै सकेन। कहिले दाया कहिले बाया यस्तै यता उता उस्को लाडो चिप्लि रह्यो। आखिर मा मैले नै १ हात ले उस्को लाडो समति दोश्रो हातले पुतिको मुख फैलायेर पुतिको मुख मा लाडो राखे। अनि उसलाई बल गरेर धकल्न लगाये। उस्ले पनि बल लगयेर धक्का दियो। बल्ल्ल पुतिमा लाडो पस्यो। खुब् मजा आयो। पैला त उस्ले लाडो पुति भित्र नै रखि रह्यो नि १ -२ मिनेट पछि मैले नै भने आगडि पछडि गर्न भनेर। उस्को लाडोको टुप्पो मा धेरै काउकुति लागेको र तातो भयेको कुरा गर्दै थियो उस्ले। मैले जे भये पनि आफै ले पनि तल बाट भये पनि पुति तल माथि गर्दै थिये। करिब आधा घन्टा चिके पछि मेरो माल झरेको जस्तो भयो। तर त्यो केटाको केहि पनि भयेको थियेन। मलाई त्यति बखत चिकन पुगेको ले उस्को लाडो मेरो पुति बाट झिकिदिय तर बिचरा को लाडो यक्दम थन्केको थन्केइ थियो। मैले उस्को लाडो केहिबेर चुसे तर पनि केहि झरेन । उस्ले भन्दै थियो कि उस्को लाडो फुट्ला जस्तो रन्केको छ। मैले सम्झे यो केटाले आज सम्म आफ्नो माल झारेको रैनछ। यक पटक पनि बिर्य नझरेको वा यक पटक पनि हस्थ मैथुन नगरेको केटा हरुको लाडो खालि ठन्केको ठन्कै गर्ने रहेछ। मलाई समस्या पर्यो अब यसको लाडो कसरि सुताउने? मैले आइडिया निकाले उस्लाई चिसो पानि ले नुहाई दिय। बल्ल त्यसको लाडो थन्कन छोड्यो। बिचरा लाई लाडो बाट फुसि झार्ने तरिका पनि थाहा रहेनछ। मैले पनि ब्लु फिल्म मा खलि चिकेको मात्रै देखायकि थिय। माल झारेको देखयेको थिईन। त्यो दिन मैले २ पटक शम्म त्यो केटालाई चिकया तर पनि केटाको माल झरेन। त्यस्तै ३-४ दिन मैले त्यो केटा लाई चिकाये। आफुलाई नपुगुन् जेल शम्म कहिले काहि त १ घन्ट्टा शम्म पनि चिके होला तर केटाको लाडो ठाडो को ठाडो नै भै रहन्थ्यो। चिसो पनि ले धोय पछि मात्रै उस्को लाडो सानो हुन्थ्यो। मैले १ दिन उस्लाई पुरा ब्लु फिल्म देखाई दिय। फिल्म मा चिकि सके पछि लाडो बाटा फुसिको पिचकरि निस्केको पनि देख्यो केटो ले। अब भने माल झार्न सिक्ला जस्तो लागेर मैले भने यस्तो माल आउन लाग्यो भने पुति बाट लाडो झिकि हल्नु पर्छ है। उस्ले हुन्छ भन्दै चिक्यो त्यो दिन पनि। तर त्यो दिन पनि उस्ले माल झार्न सकेन। येस्तै हामि दिनमा ३-४ चोटि चिक्दा पनि उस्को माल झर्न सकेको थियेन। यसमा उस्ल्लैइ धेरै पिडा भयेको थियो भने मलाई धेरै मोज। किनकि उस्को लाडो जटि बेला पनि सार्हो नै हुन्थ्यो। १५ दिन पछि को कुरा हो त्यो दिन हमिले दोश्रो पटक चिक्दै थियोउ केटो पनि यक्सपर्ट भयेको थियो मस्त आधा घन्टा देखि चिक्दै थियो यक्कसि लाडो पुति बाट झिकेर हल्लाउन थल्यो।। ओहो पहिलो पटक को भर्जिन फुसि मेरो मुख भरि नै झरिदियो। मस्त बस्ना दार फुसि सङै मैले उस्को लडो पनि चुसि दिये । बल्ल उस्को लाडो आफै सिथिल भयो।
अनिताको चाकमा पनि चिकियो	श्रीराम को घोर्ले लाडो र मेरो चिप्लो पुती	Jadya Babu	About The Author